နာရီတစ်ရာ့တစ်ဆယ်ရဲ့ ကွဲပြားမှုတွေကို ပရိသတ်တွေဆီ အသိပေးလိုက်တဲ့ ဒါရိုက်တာ တင်အောင်စိုး (ပန်းမြို့တော်) - Cele GabarCele Gabar
ဆယ်လီကမ္ဘာပရိသတ်ကြီးရေ ၊ ဒီနှစ် တပ်မတော်နေ့ ဂုဏ်ပြုဇာတ်လမ်းဖြစ်တဲ့ နာရီတစ်ရာ့တစ်ဆယ် ကို ပရိသတ်တွေကြည့်ရှုပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ နာရီတစ်ရာ့တစ်ဆယ် ဟာ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းလှတဲ့ ရေတပ်သားတွေရဲ့ အပြင်းအထန်လေ့ကျင့်ရတဲ့ ငရဲပတ် ကို အချစ်၊ အလွမ်း၊ သံယောဇဉ်တွေပေါင်းစပ်ပြီး ဖန်တီးထားတာကြောင့် စစ်သားချစ်သူ ပရိသတ်တွေ သဘောခွေ့ခဲ့ကြတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ခုပါ ။နာရီတစ်ရာ့တစ်ဆယ် ရဲ့ ကွဲပြားမှုတွေကို လူမှုကွန်ရက်ကတဆင့် ပရိသတ်တွေဆီ အသိပေးလိုက်တာက ဒါရိုက်တာ တင်အောင်စိုး(ပန်းမြို့တော်)ပါ။
ဒါရိုက်တာ တင်အောင်စိုးက “နာရီတစ်ရာ့တစ်ဆယ်… ဟာ ဟိုးအရင် ကြည်းတပ်ဇာတ်လမ်းတွေလို အပစ်အခတ်တွေ အနင့်အနဲ တွေ တိုက်ပွဲတွေ နှင့် မဟုတ်ပါဘူး …တပ်မတော်(ရေ) ရဲ့ လေ့ကျင့်ရေး ကို ဇာတ်လမ်းဖွဲ့ပြီးရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်… သေချာတာက သာမန် ပြည်သူလူထု နဲ့ တပ်မိသားစုတွေဟာ ရေတပ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း အချို့ကို သိသွားမယ်… ခံစားတတ်သွားမယ် …တပ်မတော်ရဲ့ လေ့ကျင့်ရေး အခန်း ကဏ္ဍတွေ ကို သိရှိသွားမယ် … ဒါပါပဲချစ်ခြင်းမုန်းခြင်းဆိုတာ နေရာအနှံ့မှာရှိနေမှာမို့ …ဘယ်သူ့ကိုမှ အရမ်းကောင်းတယ်အရမ်းကြိုးစားထား တယ် ဘာ ညာပြောမနေတော့ပါဘူး …တစ်ချို့တွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကလည်း အစွန်းရောက် နေတာကို မနှစ်က ဇာတ်လမ်းရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေအရ သိခွင့်ရထားတဲ့အခါ …ကြည့်ပါ…. ကြိုက်တာပြောပါ… ဒါပါပဲနော်” လို့ရေးသားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဆယ်လီကမ္ဘာပရိသတ်ကြီးရေ နာရီတစ်ရာ့တစ်ဆယ်ကို သဘောကြတယ်ဆိုရင် မှတ်ချက်ကနေ အားပေးစကားလေးတွေ ပြောခဲ့ကြပါဦးနော်။
နာရီတဈရာ့တဈဆယျရဲ့ ကှဲပွားမှုတှကေို ပရိသတျတှဆေီ အသိပေးလိုကျတဲ့ ဒါရိုကျတာ တငျအောငျစိုး (ပနျးမွို့တျော)
ဆယျလီကမ်ဘာပရိသတျကွီးရေ ၊ ဒီနှဈ တပျမတျောနေ့ ဂုဏျပွုဇာတျလမျးဖွဈတဲ့ နာရီတဈရာ့တဈဆယျ ကို ပရိသတျတှကွေညျ့ရှုပွီးဖွဈပါလိမျ့မယျ။ နာရီတဈရာ့တဈဆယျ ဟာ ခကျခဲကွမျးတမျးလှတဲ့ ရတေပျသားတှရေဲ့ အပွငျးအထနျလကေ့ငျြ့ရတဲ့ ငရဲပတျ ကို အခဈြ၊ အလှမျး၊ သံယောဇဉျတှပေေါငျးစပျပွီး ဖနျတီးထားတာကွောငျ့ စဈသားခဈြသူ ပရိသတျတှေ သဘောခှခေဲ့ကွတဲ့ ဇာတျကားကောငျးတဈခုပါ ။နာရီတဈရာ့တဈဆယျ ရဲ့ ကှဲပွားမှုတှကေို လူမှုကှနျရကျကတဆငျ့ ပရိသတျတှဆေီ အသိပေးလိုကျတာက ဒါရိုကျတာ တငျအောငျစိုး(ပနျးမွို့တျော)ပါ။
ဒါရိုကျတာ တငျအောငျစိုးက “နာရီတဈရာ့တဈဆယျ… ဟာ ဟိုးအရငျ ကွညျးတပျဇာတျလမျးတှလေို အပဈအခတျတှေ အနငျ့အနဲ တှေ တိုကျပှဲတှေ နှငျ့ မဟုတျပါဘူး …တပျမတျော(ရေ) ရဲ့ လကေ့ငျြ့ရေး ကို ဇာတျလမျးဖှဲ့ပွီးရိုကျကူးထားတာဖွဈပါတယျ… သခြောတာက သာမနျ ပွညျသူလူထု နဲ့ တပျမိသားစုတှဟော ရတေပျရဲ့ အစိတျအပိုငျး အခြို့ကို သိသှားမယျ… ခံစားတတျသှားမယျ …တပျမတျောရဲ့ လကေ့ငျြ့ရေး အခနျး ကဏ်ဍတှေ ကို သိရှိသှားမယျ … ဒါပါပဲခဈြခွငျးမုနျးခွငျးဆိုတာ နရောအနှံ့မှာရှိနမှောမို့ …ဘယျသူ့ကိုမှ အရမျးကောငျးတယျအရမျးကွိုးစားထား တယျ ဘာ ညာပွောမနတေော့ပါဘူး …တဈခြို့တှရေဲ့ စိတျနစေိတျထားကလညျး အစှနျးရောကျ နတောကို မနှဈက ဇာတျလမျးရဲ့ အတှအေ့ကွုံတှအေရ သိခှငျ့ရထားတဲ့အခါ …ကွညျ့ပါ…. ကွိုကျတာပွောပါ… ဒါပါပဲနျော” လို့ရေးသားထားတာကိုတှရေ့ပါတယျ။ ဆယျလီကမ်ဘာပရိသတျကွီးရေ နာရီတဈရာ့တဈဆယျကို သဘောကွတယျဆိုရငျ မှတျခကျြကနေ အားပေးစကားလေးတှေ ပွောခဲ့ကွပါဦးနျော။
Previous Previous post: ယောနယ်မှာသွားရောက်ရိုက်ကူးနေပြီဖြစ်တဲ့ ကဝေသေလို့ခြောက်တဲ့တစ္ဆေ
Next Next post: မွေးရပ်မြေရခိုင်ကိုပြန်ပြီး ဘုရားနေကဇာတင်မယ်ဆိုတဲ့ နေတိုး
ဖတ်မိသူတိုင်းမျက်ရည်ဝဲသွားစေမယ့် ကင်းကောင်းသားဖြစ်သူရဲ့ ဖခင်တမ်းတစာ
Published: February 7, 20196:08 pm Updated: 6:18 pm
ပြိုင်ပွဲကို ရွှေအိမ်စည်တစ်ယောက်ထည်း စေလွှတ်ခဲ့ကြောင်း ၀န်ခံလိုက်ရတဲ့ ဟန်ဇော်လတ်
Published: December 7, 20184:37 pm Updated: 4:38 pm
အချစ်တော်တွေရဲ့ လက်ဆောင်တွေကြောင့် အံ့အားသင့်ခဲ့ရတဲ့ စိုးပြည့်သဇင်
Published: February 14, 20195:38 pm Updated: 5:52 pm
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၈ရက်နေ့မှာ အပြီးသတ်ကြားနာတော့မယ် မိုးအောင်ရင်ရဲ့အမှု
Published: February 8, 20191:21 pm
Published: December 29, 20181:07 pm